Ilay ranom-boankazo mbola velona nandriaka nandalo an'i DeepDream | Famoronana an-tserasera
Eric Wert dia mitondra antsika amin'ny sary hosodoko amin'ny karazana fiainana mbola misy ra mandriaka izay mena sy volomparasy no mpandray anjara roa amin'ny loko paleta izay mety ho hitantsika.
Saingy amin'ity asa ity dia tsy afaka mijanona amin'ny aseho amin'ny fizarana voalohany fotsiny isika, satria raha mandalo DeepDream avy amin'i Google isika, tambajotra neural izay mianatra avy amin'ny zavatra manana endrika manokana, afaka mahita endrika hafa izy ary na dia ny karazan'olona rehetra aza.
DeepDream dia tambajotra tsy miankina izay rehefa nofanina miaraka amina sary marobe, ohatra ny amboa, ity iray ity dia hitady fomba hampahatsiahivana antsika ity fiainana ity amin'ireo sary napetrakay. Ny sary omena etsy ambany dia mampiseho ny valin'ny fandefasana ity tambajotra ity tamin'ny asan'i Wert, na dia mandeha amin'ny lalana hafa aza ny valiny, ary manova sary miorina amin'ny fotoana mahafa-po ny tambajotra voaofana ny vokatra.
Ity tambajotra ity miasa malefaka toa ny saintsika indraindray rehefa mahita endrika namboarina ho amin'ny sary hosodoko izay mampahatsiahy antsika ny andalana sasany amin'ny fiainantsika na ireo singa izay misy ifandraisany manokana amin'ny antony rehetra. Ny surealista koa dia milalao miaraka amin'ireo fahatsapana ireo, fa ny fomba hafa kosa miovaova miaraka amin'ity tamba-jotra ity.
Ao anatin'izay atao manokana ny fandokoana zavatra mampatahotra ao anaty ra ary amin'ny loko mena mifangaro amin'ny hatsiaky ny volomparasy. Ny fifangaroana rehetra manodidina ny fiainana mbola miaina dia mahatanteraka izany fahatsapana izany izay faritan'ny voasary hita ao amin'ireo tentacles izay mipoitra avy amin'ireo faritra voasary.
Manana ny tranonkala ianao nataon'i Eric Wert hanaraka ny asany sy ny azy fanoloran-tena manokana amin'ny androm-piainana. Ary koa ny facebook-nao, izay ahafahanao manaraka azy, hiaraka aminy isan'andro isan'andro.
Mbola betsaka ny fiainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » 'Voasary rà', nataon'i Eric Wert, nolalovan'i DeepDream